Sunday July 23, 2017 - 05:30:57 in Articles by Super Admin
Kadib markii dawladda Turkey usoo gurmatay Somalia xiligii adkaa abaaraha sanadkii 2011, kana dhisatay safaaraddeeda ugu weyn dunida, sidoo kalana deegaanka Jazeera ka hirgelisay saldhig milatari oo Somalia ugu tababarto Ciidamadda waxaa dalka Somalia si xawli ah ku soo galay Dowladda UAE , dowladda oo dooneysa in Somalia yeelan dawlad shaqeysa.
Hawlaha Imaaraadka ka hayo Somalia iyaga oo aan soo marin Dowladda waxaa kamid ah :-
1- La wareegitaanka dekedda Berbera Somaliland.
2- Saldhig Milateri oo imaaraadka Berbera ka sameysanayaan, kulana heshiiyeen maamulka Somaliland.
3- heshiiska ay la galeen maamulka Puntland oo ay kula wareegayaan Dekedda Boosaaso.
4- Imaaraadka waxay maalgeliyaan Kambaniga Saracen oo mataan la ah Black Water, horayna Baarlamaanka Soomaaliyeed ugu diiday inuu ka hawl galo dalka, kambanigaa oo ciidamada Puntland Marine boosaaso ku tababaray, qalabeeyey welina gacanta ku haya.
5- Dawladda Imaaraadka waxaa sidoo kale ciidamo u gaar ah tababaro ku siiyeen magaalada caasimadda Muqdiaho, ciidamada oo qalabkooda iyo mushaarkooda baxsadaan, ciidankaa oo beelweynta Hawiye laga ilaaliyey.
6- Dawladda Imaaraadka ayaa sidoo kale maalgelinayso si lamid ah qorshaha Company-ga Saracen Kambaniga Black water oo dhowaan Madaxweynaha Koofur galbeed heshiiska kula galay in ay ka hawl galaan deegaanadda Koofur galbeed.
7- Imaaraadka ayaa sidoo kale doonaya in Dekedda Kismaayo kala wareegaan Maamulka Jubaland iyaga oo aan soo Marin dawladda.
Hawlgaladdaan lagu cuuryaaminayo qaranimada Somalia loogana hortagayo Dawladda Turkey ayaan ka socon deegaanada Gaalkacyo ilaa Muqdisho, deegaanadaa oo Beelweynta Hawiye gaarka u degan tahay marka laga reebo Caasimadda Muqdisho oo dawladda UAE aad uga taxadartay ciidamada ay ka qoranayso Muqdisho in beesha Hawiye askar badan kasoo gelin.
Isku soo wada duube dawladda Imaaraadka hawlaha ay ka wado dalka dhamaan ayaa ah qorshe dowladda Federalka lagu laciifinayo loogana horkeenayo maamuladda gobolada sidoo kale Dawladda Imaaraadka ayaa dooneysa in ay ku qasabto Dawladda Turkey iney isaga huleesho dalka Somalia , iyagga oo doonaya in Somalia weligeed ka dhalan dawlad l shaqeysa oo dekedeheeda ciriiri geliya arintaana waxaa gacan ku siinaya maamul goboleedyada Somalia qaar kamid ah.